यस लेखमा म थिएटर र सिनेमा को अद्भुत र अचम्मको अभिनेत्री बारेमा बताउन चाहन्छु। यो धेरै रुचि त Natali Antonovoy, उनको जीवनी र को तथ्य Filmography, व्यक्तिगत जीवन र यो लेखको बिषय हुन्छन्।
जीवनी नतालिया Antonova सबैभन्दा हाम्रो लागि रोचक छ, त्यसैले व्यक्तिगत जानकारी सुरु गरौँ। उनको आमाबाबुले सबै कला जोडिएको छैन भनेर यसलाई उल्लेख हुनुपर्छ: मेरो आमा शिक्षक थियो, र मेरो बुबा - सेना। नतालिया Antonova बाल्यकाल यार्ड मा बिताए। त्यो निरन्तर bullies र रमाइलो बनायो मित्र ज्यादातर को मान्छे संग skated र फुटबल खेले, धेरै बदमास बच्चा थियो। अभिनेत्री सम्झन्छन् रूपमा, उत्तरार्द्ध उनको मनपर्ने खेल थियो। अक्सर गेट उभिरहेको, यो केहि लक्ष्य सम्झना डर थियो भन्दा बढी छ। धन्यवाद भाइ Natasha खेल केटाहरु भन्दा झन् खराब छ खेल्न थाले।
नतालिया पनि एक अभिनेत्री बन्ने सपना देख्यो छैन, उनको क्यारियर थप र्नतकी आकर्षित छ। तर केटी आमा कडा विरुद्धमा थियो, र Antonov एक बच्चाको रूपमा एक सानो पोटिलो थियो, सपना आंकडा अनुमति छैन पूरा गर्न।
अभिनेत्री - उनको कल?
यो त स्कूल पछि, नतालिया Antonova, अझै पनि कलेज Shchukin जानुहोस् र एउटा अभिनेत्री बन्न निर्णय भनेर भयो। परीक्षा त्यो सजिलै पारित, त्यसैले कुनै पनि समस्या बिना एक विद्यार्थी भयो। त्यो Olgoy Budinoy र Elenoy Zaharovoy अध्ययन। Svetlana - बाटो साथ, नतालिया जाने र एक बहिनी निर्णय गरे। अब यो टिभी श्रृंखला "स्टेशन" र "मेरो प्रेम" मा देख्न सकिन्छ साथै सुविधा फिलिम "Piranha लागि शिकार" मा। म एक अभिनेता र भान्जा हुन चाहन्थे Antonova ओलेग, अब सफलतापूर्वक थिएटर मा काम गरिरहेको छ जो।
जीवनी नतालिया Antonova नयाँ अनुभव भरिएको भएको छ, त्यो थियेटर प्ले गर्न थाले। Gogol। उनको सहभागिता संग सबै भन्दा प्रसिद्ध प्रदर्शन को निम्न आवंटित गर्न आवश्यक छ।: "मेरो अपराध," "विदेशी बच्चा", "Ivanov"
Filmography नतालिया Antonova 1997 देखि सुरु हुन्छ। त्यो उनको पहिलो भूमिका पायो जब हो। स्मरणीय debut उहाँले फिल्म देखा केटी पछि "किरण कुइरो लागेको युवा मा" को चित्रकला थियो "मा रूसी मेरो पहिलो शिक्षक, वा स्नातक।" र त्यसपछि तल भूमिका गिर, र स्क्रीन झन् पूर्ण-लम्बाइको फिलिमहरु देखा पर्न थाले छन् र टिभीमा नतालिया Antonova संग देखाउँछ। तिनीहरूलाई बीच कुख्यात "Kamenskaya", "शरद ब्लुज" र अन्य काम थियो।
नतालिया Antonova, जसको परिवार सधैं उनको समर्थित छ, उहाँको छोरा लोकप्रिय टिभी श्रृंखला "Brigada" मा हटाउन समय थियो। साशा सेतो - त्यहाँ एक केटा बच्चा मुख्य पात्र प्ले छ। तर, त्यो यो अनुभव सबै भन्दा राम्रो थियो कि विश्वास गर्दछन्। शूटिंग Artem खराब मुड मा घर आए पछि, उहाँले पिन्चे र कहिलेकाहीं पनि रो थियो, त्यसैले मेरो आमाले छोरा राख्न निर्णय गरे। यो लामो चलचित्रमा काम गरेको छैन।
"अर्को जीवन" ख्याति शो मा काम पछि उनको आए। त्यहाँ उनले एक विश्वस्त र अर्थपूर्ण केटी Polina, राम्रो भाग्य को खोज मा राजधानी आउनुभएका प्ले।
2003 मा, Natali Antonovoy Filmography, भर्न टिभी श्रृंखला "को सम्राट प्रेम", डब्ल्यू Azernikova गरेर उपन्यास मा खिच्नुभयो थियो जसमा भूमिका थप्न जारी छ।
अभिनेत्री सम्राट्लाई गरेको Mistress थियो राजकुमारी क्याथरीन, को भूमिका मिल्यो। यसलाई खेल्न धेरै कठिन थियो भन्ने तथ्यलाई बावजुद नतालिया काम गरेको छ। शो को लागि विशेष गरी युग धेरै वेशभूषा सिलना थिए, र फर्नीचर संग्रहालय बाहिर प्राप्त गर्न व्यवस्थित। नतालिया सम्झन्छन्, त्यो यी शानदार कपडे मा प्रयास को एक विशेष thrill थियो, र उनको भावना मात्र विवाह पोशाक छनौट उत्पन्न ती संग तुलना गर्न सकिएन। त्यो स्कर्ट को गुरुत्वाकर्षण प्रयोग गर्न सजिलो थिएन, त्यसैले त्यो कहिले काँही पनि चुक्छौं र गिर सक्छ। एक दृश्य मा, लुगा अभिनेत्री एक गाडी मा बस्न रोकियो, त्यसैले हामी धेरै छ रूपमा डबल्स गर्न थियो।
नतालिया Antonova संग सिनेमा थप र प्राय देखा पर्न थाले, त्यसैले यसलाई थप र थप चिन्न अभिनेत्री बन्ने छ। अक्सर स्क्रिनमा, यो एक धेरै बलियो र आत्म-विश्वस्त महिलाहरु खेल्छ। यी मध्ये एक चलचित्र "हठी लक्ष्य 'मा डीन थियो। नतालिया किनभने जो वास्तवमा, समस्या मा पतन, तर नयाँ मित्र र साँचो प्रेम यसलाई छोड्छ, gangster पत्नीहरू को रूप मा दर्शक अघि देखा पर्नुभयो।
त्यसपछि एउटा सानो श्रृंखला "प्रेम को intrigues," त्यो शेयर जो भाग्य सबै जटिलताओं पतन कलाकार भिक्टोरिया, को भूमिका खेलेका जहाँ आए। 2008 मा उहाँले नतालिया खेल्छ जहाँ सफलतापूर्वक विवाह र बच्चा fathered जो इरेन, को श्रृंखला "आश्चर्य", प्रकाशित। केही वर्षपछि अमेरिका बसोबास गर्ने आफ्नो जैविक आमा, घोषणा गरे। र महान Irina आफ्नो छोरा चयन गर्ने अधिकार दिने।
अर्को त्यो "बेकर गरेको दर्जन" को कमेडी मा तारा अङ्कित। अभिनेत्री त्यो क्रिसमस कथा कसरी मन पराएका सम्झन्छन्। त्यो Audition गए र एक विशाल यातायात जाम मा पायो, त्यसैले लिपि पढ्न निर्णय गरे। र उहाँले नतालिया आँसु गर्न हाँसिन् कि धेरै मन पर्यो, र परीक्षा राम्रो मुडमा आउँछन्। चाँडै Antonov स्वीकृत भएको थियो। त्यो दर्शक पहिले नै चलचित्रमा अपराधीहरूलाई को थकित छ कि भन्ने विश्वास गर्छ, त्यो केहि सजिलो, सरल, हास्यास्पद र दयालु चाहन्छ, र "बेकर गरेको दर्जन" - यो तस्वीर भनेर पक्कै एक नजर लायक यो छ।
नतालिया Antonova र अलेक्जेन्डर Vershinin
नतालिया 1996 मा अलेक्जेन्डर विवाह गरे। जोडी नाम थियो Artyom एक छोरा थिए। उहाँले5वर्षको हुँदा, मेरो आमाबाबुले छोडपत्र गर्ने निर्णय गरे। नतालिया यो एक छोरा थिएनन् भने, त्यसपछि अलग धेरै पहिले भयो होला भनेर भन्छन्। त्यो विवाह किनभने उनको पूर्व-पति उनको जीवन शैली, बानी र सोख स्वीकार गरेनन् अप भङ्ग भनेर भन्छन्। Antonov विश्वास गर्छ कि विवाह गल्ती: तिनीहरूले प्रत्येक अन्य ठेगाना प्राप्त गर्न अब पूरा भएको थियो।
Nikolay Semenov को विवाह
अब नतालिया एक obstetrician-स्त्रीरोग विशेषज्ञ र व्यापारी को अनुहार मा आनन्द छ Nikolay Semenov। पहिले नै उहाँले आफ्नो पहिलो विवाह (पनि Anton) बाट एक छोरा छ, र अभिनेत्री उहाँलाई राम्रो सम्बन्ध राख्छ। र 2005 मा, त्यो पति Nikita नाम निर्णय गर्ने अर्को छोरा दिनुभयो। एक सानो पछि, जोडी देखा पर्नुभयो र अर्को बच्चा, र पनि एक छोरा - मैक्सिम, जो सिर्फ एक वर्ष कान्छो भाइ Nikita। अब नतालिया - चार छोराहरू सुखी आमा।
पति र पत्नी आफ्नो घर मा देश बाँचिरहेका छौं। तिनीहरूले सम्झना स्वरूप, तिनीहरूले सधैं शहर छैन गुँड छ चाहन्थे, र गर्भावस्था को समयमा Natalya तिनीहरूले उपनगर मा एक घर भाडामा, र त्यसपछि प्राप्त र आफ्नो सम्पत्ति। शहर बाहिर तिनीहरूले प्रत्येक राजधानी मा एक घर छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, सबै वर्ष दौर बाँचिरहेका छौं। र तिनीहरूले सबै छिमेकी मास्को फर्के किनभने, लगभग एक हिउँदमा छन्।
तर नैनाले बस मामिलामा यो राज्य मनपर्छ। उनले त्यो वरिपरि घाँस, नीलो आकाश र रूखहरू देख्दा मात्र एक वास्तविक व्यक्ति जस्तै महसुस भनेर भन्छन्। यो मौन, asceticism को कगार मा एकान्त त्यो चाँडै शक्ति पुनर्स्थापना गर्न थाले, उनको क्रोधित ऊर्जा चार्ज। सुत्न, अब त्यो पाँच भन्दा कम घन्टा छन्, त्यसैले यसलाई सधैं राम्रो आत्माको मा शहर मा शूटिंग गर्न आउँछ।
Filmography नतालिया Antonova उनको प्रशंसक ठूलो चासो छ, तर अझै पनि उनको मनोवृत्ति, बानी र मनोवृत्ति जान्न महत्वपूर्ण अझ थप। यो अभिनेत्री जस्तै यस्तो उज्ज्वल र उज्ज्वल व्यक्ति पक्कै पनि सबै पक्षहरूमा मा खुसी हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। र त यो छ! त्यहाँ सद्भाव र समझ छ जो एक मायालु परिवार बाहेक, त्यो सामाग्री सामान उनको मात्र होइन तर आध्यात्मिक दिने, थप र आफ्नो सपना काम पाइएन।
Genri Kavill (हेनरी केविल) - जीवनी, Filmography, फोटो र व्यक्तिगत जीवन
सर्वश्रेष्ठ गुप्तचरहरू (चलचित्र): सूची
अभिनेता "तरवार 2"। नयाँ अनुहारहरू र पुरानो मित्र
कसरी Firebird आकर्षित गर्न? stepwise नीति
स्टीव यर्मरन एक "ठूलो कप्तान" हो जसले असम्भव गर्दछ!
संसारमा मात्र जहरीली स्तनपान
ल्याप्टप सुविधाहरू एसर 5100. समीक्षा
यो जला को बबल पियर्स गर्न सम्भव छ? पहिलो सहायता को सिद्धान्त
उत्तर जनावरहरूलाई बारेमा छोराछोरीको पहेली